Android miyey isticmaashaa batteri fara badan markay shaqo la’aan tahay | Androidsis
Eder Ferreño | | Tababarada
Xaalad ay inbadan oo kamid ah isticmaaleyaasha Android ay la kulmeen mararka qaar ayaa ah inaan ka tagnay taleefanka oo aan waxtar lahayn in mudo ah markaan dib u isticmaalno aan aragno taas batteriga ayaa wax badan hoos u dhacay. Waa wax aan la yaabno oo noo horseedda in aan la yaabno bal baytariga taleefanka xaaladdiisu way wanaagsan tahay. Ma iska caadi baa in tan oo kale dhacdo?
Waa a su'aal aad u soo noqnoqda oo ka dhex jirta dadka isticmaala taleefanka Android. Xaqiiqdu waxay tahay inay qayb ahaan caadi tahay, in kasta oo aynaan isticmaaleynin, haddana taleefannadeenna casriga ahi waxay sii waddaa inay howlaha qabato. Ma jiro daqiiqad aan waxba qabanayn. Waxyaabaha ku habboon isticmaalka bateriga.
1 Android hurda
2 Lakabyada shaqsiyadeed
Ilaa iyo inta taleefanku daaran yahay, macno malahan haddii aan isticmaaleyno ama uu shaqeynayo, Android marwalba way socotaa oo socotaa. Sidaa darteed, batteriga waa la wada baabbi'in doonaa waqti kasta. Haddii aad rabto inaad tan iska ilaaliso, markaa waxa kaliya ee aad sameyn karto waa inaad dami taleefanka inta lagu jiro waqtiga aadan isticmaaleynin. Waqtiyada oo dhan, codsiyada waxay la xiriiraan nidaamka qalliinka.
Dhibaatadu waxay ahayd in bilowgii, Android ay siisay xorriyad badan codsiyada iyo habsocodku waxay ku socon doonaan asalka. Horumariyaasha waxaa laga codsaday inay yareeyaan isticmaalka, laakiin tani maahan wax dhab ahaan dhacay. Sidaa darteed, sidaad horayba u ogayd, waxaa jira barnaamijyo badan oo cuno qadar aad u badan oo batteri ah oo xagga asalka ah.
Imaatinka Android Marshmallow, Google wuxuu soo saaray tallaabooyin taxane ah. Midkood waa Doze, oo laga yaabo inuu u muuqdo qaar idinka mid ah aqoon. Waa shaqo in ogaadaa marka isticmaalaha uu joojiyay isticmaalka taleefanka. Sidan oo kale, waxay kugu quusin doontaa riyo, taas oo kaliya nidaamka uu ka shaqeeyo. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka batteriga ka yar qalabka inta uu shaqeynayo.
Sidaa darteed, ka dib markaad taleefankaaga istaagto, haddii aad hubiso batteriga isticmaalay inta badan, waxaad arki doontaa waxa nidaamka Android ka soo baxa. Maaha in nidaamka qalliinka si xun loo qaabeeyey. Waa nidaamkii shaqaynayey inta aanu taleefanku shaqaynayn. Waxaan ka shaqeynayay sidii looga hortagi lahaa in isticmaalka tamarta uu sareeyo. Markaa inkasta oo ay u soo baxdo sababta keentay isticmaalka la sheegay, haddana waa waxa caawinaya cuncunka si aan cirka loo shaacin.
Dhibaatadu waxay timaaddaa markay waxaan ka hadleynaa lakabyada qaabeynta. Waa mid ka mid ah dhinacyadaas aan ku khasban nahay tixgelin markaad heleyso macluumaad ku saabsan batteriga taleefanka Android. Sida inbadan oo idinka mid ah durba ogtahay, lakabka u habeynta ayaa macnaheedu noqon karaa in isticmaalka taleefanka uu ka sareeyo.
Soosaarayaasha ku shaqeeya Android, markay soo bandhigaan lakab u gaar ah, taleefanka ayey wax kasta oo ay doonaan ku tafatiri karaan. Kaliya barnaamijyada iyo adeegyada Google waa wax aan wax laga beddeli karin, inkasta oo tani isbadali kartoDhibaatadu waxay tahay inay jiraan soosaarayaal soo bandhigaya lakab loo habeeyo oo ay ka buuxaan codsiyo iyo walxo, kuwaas oo aakhirka sababa isticmaalka batteriga oo sarreeya.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira xitaa kuwa sameeya heerarkooda. Marka taas go'aamiso barnaamijyada ama nidaamyada ka shaqeyn kara galka. Waxyaabaha sababa isticmaalka batteriga aadka u sarreeya, marka lagu daro saameynta hawlgalka qalabka sida Doze, oo si hufan u doonaya in la yareeyo isticmaalka xilliyadaas nasashada. Taasi waa sababta, mararka qaarkood, taleefannada leh Android One oo ah nidaamka hawlgalka noqo ikhtiyaar kafiican. Maaddaama ay leeyihiin wax yar oo lagu daro iyo adeegsi yar.
Shaki la'aan, arrinta batteriga ayaa weli ah mid ka mid ah maaddooyinka sugaya ee ku jira Android. Gaar ahaan marka la eego farqiga weyn ee u dhexeeya lakabyada qaabeynta, taas oo keenta kala duwanaansho ballaaran oo ku saabsan isticmaalka bilaa camalka ah. Waan arki doonaa haddii 2019 horumar lagu sameyn karo arimahan. Maadaama ay lagama maarmaan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Waa maxay sababta taleefanka Android uu u isticmaalo batteri badan marka uu shaqo la'aan yahay
farshaxan samada dijo
Aynu aragno hadday tahay qaabka injineernimada, ka-noqoshada aps-ka xagga dambe waxay joojineysaa in batterigu dhammaado
Jawaab si artifice celeste